Safiirka Soomaaliya ee Kiinya iyo Wasiirkiisa Arrimaha Dibadda oo Muqdisho soo gaaray – Kalfadhi
Safiirka Soomaaliya u joogay Kiinya, Maxamuud Axmed Nuur (Tarsan), ayaa saaka soo gaaray magaalada Muqdisho. Isaga oo u hogaansamaya go’aanka Kiinya ee ahaa inuu isaga baxo dalkeeda ayuu saakadii horaba kasoo duulay magaalada Neyroobi ee caasimadda dalka Kiinya.
Waxaa Neyroobi kala soo duulay, oo ay Muqdisho isla yimaadeen, Wasiirka Arrimaha Dibadda Soomaaliya, Axmed Ciise Cawad, oo markii uu soo baxay go’aanka ay Kiinya ku hakisay diblomaasiyaddii Soomaaliya, joogay Neyroobi. Waxaa, sidoo kale, Tarsan imaanshiyahiisa Muqdisho ku wehliyey madax kale oo Xukumadda ka tirsan.
Isla sidaas oo kale, waxaa gaaray Neyroobi Safiirka Kiinya u joogay Soomaaliya, Luckas Tumbo, kaas oo ay isna dowladdiisu ku amartay inuu dib ugu laabto dalkiisa. Isaga iyo saraakiil ka tirsanaa Safaaradda Kiinya ee Muqdisho ayaa saakay ka duulay Garoonka Diyaaradaha Aadan Cabdulle, si ay ugu hogaansamaan amarka dowladdooda.
Kiinya waxa ay Soomaaliya ku tilmaantay Cadwga Kiinya, waxaana sababta ay u qaadatay go’aanka ah in ay hakiso xiriirkii diblomaasiyadeed ee Soomaaliya ay ku macneysay markii ay Soomaaliya ku dartay Xirmooyinka Shidaalka dalkeeda, ee ay kusoo bandhigtay dhawaan Ingiriiska, badda ay ku haysato Soomaaliya.
Dowladda Federaalka Soomaaliya ilaa iyo hadda kama aysan hadlin go’aankaas, laakiin dad ay ka mid yihiin Xildhibaanno ka tirsan Baarlamaanka Soomaaliya ayaa Barahooda Bulshada kusoo qoray dhigmooyin ay ku dhiiragelinayaan xukumadda, oo ay shacabka iyo siyaasiyiintana ugu baaqayaan in loo mid ahaado u jawaabista Kiinya.